अत्यन्तै दुखद खबर : फेरी काठमाडौंमा पुग्यो कोरोना ! – Online Nepal
अत्यन्तै दुखद खबर : फेरी काठमाडौंमा पुग्यो कोरोना !
June 15, 2020 422
काठमाडौँ : काठमाडौं उपत्यकामा फेरी कोरोना संक्रमित भेटिएका छन् । सोमबारको अद्यावधिक विवरणअनुसार सोमबार थप ४ सय ५१ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छन ।जसमा काठमाडौं उपत्यकाका ५ जना रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार काठमाडौंका दुई पुरुष र दुई महिला तथा ललितपुरको एक महिलामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित प्रेस ब्रिफिकमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा। जागेश्वर गौतमले बताएअनुसार संक्रमितको संख्या भने ६२ सय ११ जना पुगेको छ ।कोरोना संक्रमण निको भएर हालसम्म १ हजार ४१ जना डिस्चार्ज भएका छन् । जसमा ९ सय ३७ पुरुष र १ सय ४ जना महिला रहेका छन् । आज थप ६७ जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन् । जसमध्ये ६० पुरुष तथा ७ महिला रहेका छन् ।
यो पनि पढ्नुहोस: घटना हुनुभन्दा १ दिन अघि गर्लफ्रेन्डलाई लिएर कहाँ गएका थिए सुशान्त ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुत एक युवतीसंग प्रेम सम्बन्धमा रहेको खुलेको छ । उनी रिहासंग प्रेममा रहेको र देहत्याग गर्नु एक दिन अघि मात्र उनले आफ्नो प्रेमिकालाई घर पठाएको खुलासा भएको छ । प्रहरीले उनले यस्तो निर्णय गर्नुको कारण वारे गरेको अनुसन्धानमा उनको जिवनको अर्को पाटो बाहिर आएको हो ।
Prevकाठमाडौं छिर्न झन कठिनाइ, गृहले लागू गर्‍यो यस्तो नियम
Nextपानीमा रुझ्दै आफ्नो प्रिय साथी अभिनेता सुशान्त सिंह राजपुतलाई बिदाई गर्न आइपुगे बलिउड सेलिब्रेटी
सेती अस्पतालमा कोरोना भाईरस परीक्षण गरिएका ६५ जनामध्ये ४ जनामा मात्रै ‘पोजेटिभ’ रिपोर्ट
कोरोनाबाट अमेरिकामा फेरी एक नेपालीको मृ*त्यु !